I-Nevada Asset Protection Trust trustee, Ummeli Nezindleko
Yini i-Nevada Asset Protection Trust?
Amathemba wokuvikela impahla we-Nevada ayizethembisi zokuziqhelanisa nokuzimela ezisebenzayo. Lokhu kusho ukuthi ungaxazulula ukuthembana futhi uzuze kwezimpahla. Ngaphezu kwalokho, ungakwenza kokubili futhi ujabulele ukuvikelwa kwabakweletwayo noma abomanga bezomthetho. Uma usudlulisela impahla kwi-Nevada Protection Trust, ngemuva kweminyaka emibili idlulile, ukuthembeka kuvikela ingcebo yakho kwabakweletwayo. Uma ushicilela ukuhanjiswa kwempahla ethembeni, ngokwesibonelo, ephephandabeni iNevada, kunciphisa lelo sikhathi lesikhathi kufika ezinyangeni eziyisithupha. Ngakho-ke, ngemuva kokuphela kwesilinganiso sokulinganiselwa, ukuthembeka kukhiya impahla yakho ngaphakathi. Ngakho-ke, abakweletwayo bakho abakwazi ukufinyelela kubo ukwanelisa isahlulelo.
Kunemikhawulo embalwa kakhulu kumakhasimende athembekile; inqobo nje uma ungazange usungule ukwethenjwa kokuqola ababolekisi abaziwayo futhi uhlangabezana nemithetho elula yokusebenza, umthetho ovikelayo weNevada ungakunika izinzuzo ezihlonishwayo zokuvikelwa kwempahla. Okungenani umphatheli oyedwa kufanele abe yisakhamuzi saseNevada esibhekele ukugcina amarekhodi ethembekile, ukugcwalisa izidingo zentela. Othile eNevada udinga ukuphatha ngokuyinhloko ukwethenjwa. Othile esifundazweni saseNevada udinga ukuba ngumlawuli oyinhloko wetrasti.
Ama-Trusts e-Asset Protection
Izinhlangano kanye nezinhlangano
Ukusungulwa Kwe-akhawunti Yasebhange
Izinhlelo Zezikweletu Zebhizinisi
Sinikeza iNevada kakhulu
izinsiza kanye mahhala
Ukuvikelwa Kwengcebo nokulawula okuncane
Abahlali bokwethembana (une) amandla amakhulu emisebenzini yokwethembana, ikakhulukazi ukuthi umphatheli wenza kanjani ukwaba ukwethemba abazuzayo. Awukwazanga uku-oda ngqo umphathiswa ukuthi enze inkokhelo ejwayelekile kumuntu othembekile. Uma ukwazi, ijaji belingakuphoqa ukuthi usebenzise lawo mandla ukuqondisa izimali ezitheni zakho ezisemthethweni. Kodwa-ke, ungacela ukwabiwa kwenziwe. Futhi ungaba namandla okuvotela ukwabiwa kwabanye abazuzi be-trust. Lokhu kuvumela indawo yokuhlala ethembekile ukuthi ihlale esihlalweni somshayeli ngenkathi kwabiwa impahla. Unekhono lobude bezingalo ukuthonya isikhathi nenani lokusabalalisa ngokwakho.
Esinye isici sokuthula kwengqondo esakhelwe kule mithetho yikhono lokuthi abahlali abathenjwayo basebenze "njengabaphatheli bezimali abatshalile imali." Ngakho-ke, ungaphatha unilaterally futhi utshale izimpahla zokuthembela. Esinye isici ngamandla okususa nokumiselela umphatheli wakho weNevada. Ekugcineni, ungasungula ukuthi i-trust ihambisa kanjani izimpahla lapho indawo yokuhlala idlula kulokho esikubiza ngokuthi "amandla wokuqokwa".
Izinkundla zokuvikela impahla ziyinto entsha e-US futhi izifundazwe ezimbalwa kuphela ezenze umthetho wokuvikela impahla. Ochwepheshe kudala bazi i-Nevada njengegunya lokuphatha ibhizinisi elinemithetho yenhlangano evumayo nemithetho ye-LLC. Izinkantolo ezifakazele ukuthi zisekela iveli yenkampani. Manje, i-Nevada iphumele ngaphandle njengegunya lekhaya lokuzikhethela lokuxazulula ukwethenjwa kokuvikelwa kwempahla. Kuzoba iminyaka ethile ngaphambi kokuba umthetho wamacala uqhamuke. Kodwa-ke imithetho ye-Nevada icacile ekuvikelweni okunikayo ekuqinisekisweni kokuvikelwa kwempahla okusetshenziswe kahle futhi okuzinzile.
Kuthiwa iNevada inikeza uhlaka olungcono kakhulu lwezomthetho lokwakha nokugcina ukuthembeka kwempahla yasekhaya. Ku-2010 Nevada trust trust ukuvikela impahla ithole umagazini ongu-A + ngumagazini weForbes, ohamba phambili esizweni futhi okuwukuphela kwesimo sokuthola i-A + ngaphandle kwe13.
Azikho izintela ezingenayo zombuso
Isimemezelo esifushane kakhulu semikhawulo ekudlulisweni kwempahla (iminyaka engu-2), esingaba sifushane njengezinyanga ze-6 uma sisebenze kahle
Bonke abakweletwayo bavinjelwe ekufinyeleleni amafa trust, kufaka phakathi i-alimony, ukusekelwa kwengane, izahlulelo, njll.
Izinga lobufakazi eliphakeme kakhulu; noma ngubani okweletwayo aphonsela inselelo ukudluliswa kwezimpahla kufanele anikeze ubufakazi obucacile nobukholisayo benjongo yokuqola
Ukuvikelwa Kwempahla Yasekhaya
Uyacelwa ukuthi uhlale ukhumbula, ukwethenjwa kwempahla yokuvikelwa kwempahla ye-Nevada ngokuyinhloko kubahlali be-Nevada abanezimpahla ezenzelwe i-Nevada. Umthetho wamacala awubukeki kahle uma i -hlali ihlala kwesinye isimo. Sibonile amajaji ethi, “Anginendaba ukuthi uNevada unale mithetho. Asinabo lapha eCalifornia, New York, njll. Ngakho-ke ngiyala abaphathi ukuthi baphendule impahla.
Ngakho-ke, yini ikhambi lezakhamuzi ezingewona amaNevada? Yebo, inhlangano yethu futhi ine-Trigger Trust yesizwe kuphela. Lokho kuthembela ukwethenjwa kwempahla esekwe e-US kuze kube yilapho sekufika umbandezelo osemthethweni. Lapho-ke abaphathi bathatha isinqumo sokudonsela isigatshana sokuphunyuka futhi baguqule ukuthembeka kuthuluzi eliqine lokuvikela impahla .... Izinkampani zethu ezinamalayisense, nezihlanganisiwe, nezokuqinisa umthetho ezikwamanye amazwe njengezinyathelo njenge-trustee. Umphathi weNevada kuzodingeka alandele imiyalo yenkantolo yase-US. Ngakolunye uhlangothi, ngomphathimandla wakwelinye izwe, akudingekile ukuthi alandele imiyalo yenkantolo yezangaphandle, futhi angenqaba ukuguqula impahla ye-trust isitha sakho esisemthethweni.
Izinkampani zabameli nezinkampani zokuthembela zisungula ama-Nevada trust. Ungashayela enye yezinombolo ezingenhla bese ubuza imibuzo kochwepheshe bethu abangochwepheshe abazokusiza ukukuqondisa futhi uphendule imibuzo yakho. Ngenye indlela, ungagcwalisa elinye lefomu lokubonisana lamahhala. Omunye wabameli bethu angabhala ukwethembana okungukuthi i-taylormade yezidingo zakho.
Hlukanisa Isu Lakho Lokuvikela Impahla
Uma usunecebo lokuvikela impahla selikhona, ukwethenjwa kwe-Nevada, noma okungcono nokho, ukuthembana okubangela, kunikeza ukwehluka kucebo lakho. Amafemu aphezulu wokuvikela impahla emhlabeni atusa ukusabalalisa ukuvikelwa kwengcebo yakho nxazonke ezimotweni eziningi zokuvikelwa kwempahla nasezindaweni eziningi zokuvikelwa kwempahla. Lokhu kuzokwenza ukuthi umphikisi wakho osemthethweni alwe impi ngamafonti amaningi, engeza izindleko ezinkulu ezindlekweni zomthetho zokulandela umcebo wakho. Ukuthembana kwe-Nevada noma i-trigger trust kungancoma noma yiluphi uhlelo lokuvikela impahla, olwandle nolwekhaya.
Khuluma nochwepheshe wezinsizakalo zebhizinisi laseNevada namuhla, ukubonisana kwamahhala ngezikhathi zebhizinisi ezejwayelekile, shayela i-1-888-444-4412